Wasaaradda Caafimaadka XFS oo Galmudug gaarsiisay qalab looga hor-taggo Covid-19. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By C/raxman maxamed Ibrahim / March 31, 2020 March 31, 2020
Muqdisho (SONNA)- Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa qalab looga hortegayo cudurka karoona fayras gaarsiisay maamul goboleedka Galmudug.
Qalabkaan caafimaad oo ah mid looga hortegayo faafida cudurka adduunka dhibaatada ba’an ku haaya ee karoona fayras ayaa waxaa wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya gacan ka siiyay cunnada adduunka ee WFP.
Agaasimaha qorsheynta wasaaradda caafimaadka maamulka Galmudug Dr. C/xakiin Maxamed Diiriye ayaa wasaaradda kala wareegay isagoo uga mahadceliyay dowladda Soomaaliya dadaalka ay ugu jirto ka hortaga corona virus.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa wado dadaallo looga hortegayo cudurka karoona fayras iyadoo qaaday talaabooyin badan oo bulshadu ay amaantay, kuwaas oo ay kamid yihiin hakinta duulimaadyada caalamiga ahaa,kuwa gudaha,goobaha waxbarashada iyo in la yareeyo meelaha lagu caweeyo iyadoo dhammaan maamul goboleedyada dalka ku wareejisay qalabki looga hortegi lahaa cudurka.